Kinema Citrus – Studio – MMANIME
Barakamon Review crd စာလုံးတွေကိုစုတ်တံနဲ့ ရေးဆွဲတဲ့အနုပညာရှင် Handa ဟာ ငယ်ရွယ်ပြီး စိတ်ဆတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ ဒီဇာတ်လမ်းကို အစချီလာတာကတော့ သူ့အနုပညာကို ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူး မကောင်းဘူးလို့ ဝေဖန်ခံရတာကနေ သူ့ကိုယ်သူ တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပြသမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တစ်ယောက်ထဲအေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်ပြီး သူ့အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်နိုင်အောင် ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းကို ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီကျွန်းမှာဆိုရင် သူအေးအေးဆေးဆေး တက်လမ်းကိုရှာဖွေနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အဲ့လိုဆိုပေမယ့် ဟိုရောက်တော့ ကလေးမလေး Naru နဲ့တွေ့ဆုံပြီး ဗရုတ်သုတ်ခတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကလေးလေးကြောင့် Handa တစ်ယောက် ဘာတွေကို နားလည်လာမလဲ? ဒီ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်မှာရော Handa တစ်ယောက် အမြင်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာမလဲ? သူ့ရဲ့ စိတ်ထဲက အရှုပ်အထွေးတွေကရော အမြင်သစ်တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားမှာလား? သူ့အနုပညာတက်လမ်းကရော ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကတော့ ဇာတ်လမ်းလေးကိုပဲ အားပေးလိုက်ပါတော့ဗျာ Main character နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Naru နဲ့ Handa တို့ကြားက ဇာတ်လမ်းနဲ့ ရယ်စရာလေးတွေကို ကြည်ကြည်နူးနူးကြည့်ရမယ့် comedy & slice of ...
Made In Abyss Japanese メイドインアビス Information Type: TV Episodes: 13 Status: Finished Airing Aired: Jul 7, 2017 to Sep 29, 2017 Premiered: Summer 2017 Broadcast: Fridays at 21:30 (JST) Producers: Media Factory, AT-X, Takeshobo, Sony Music Communications, Kadokawa Media House, Cygames, Kanetsu Co., LTD. Licensors: Sentai Filmworks Studios: Kinema Citrus Source: Web manga Genres: Sci-Fi, Adventure, Mystery, Drama, Fantasy Duration: 25 min. per ep. Rating: R - 17+ (violence & profanity) ရီကို - ပျောက်ဆုံးနေသော သုတ်သင်သူ ဝီစီဖြူ လိုင်ဇာ၏သမီး။ သူ၏အမေခြေရာကိုနင်းလိုစိတ်ပြင်းပြကာ အသူတစ်ရာနက်သောချောက်ကြီး၏ ...
The Rising of The Shield Hero Synopsis of The Rising of The Shield Hero ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောရရင်တော့ ဒိုင်းကိုကိုဖြစ်လာမယ့်ကောင်လေးဟာ Universeအပြိူင် ခေါ်parallel universeတစ်ခုကို နောက်ထပ်လူသုံးယောက်နဲ့ရောက်သွားပါတယ် အဲ့လေးယောက်ဟာအဲ့ကမ္ဘာမှာသူရဲကောင်းဖြစ်လာဖို့အတွက် တစ်ယောက်ကိုလက်နက်တစ်မျိုးစီရပါတယ် ကျန်တဲ့လူတွေဟာဓားတို့ဘာတို့စတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်ရခဲ့ပေမယ့် ဒိုင်းကိုကိုကတော့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းပေါက်စလေးတစ်ခုသာရခဲ့ပါတယ် တခြားလူတွေဟာအစွမ်းပိုထက်တော့ နောက်လိုက်တွေများများရပေမယ့် ဒိုင်းကိုကိုခင်မြာမှာတော့ ရှားရှားပါးပါးတစ်ယောက်ပဲရပါတယ် အဲ့တစ်ယောက်ကလည်း…. ဆက်ပြောရင်အပိုင်း၁နဲ့၂လောက်ကိုspoileသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ် အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်ကြပါနော့် EPISODE 1 EPISODE2EPISODE3EPISODE4EPISODE5EPISODE6EPISODE7EPISODE 8 EPISODE9EPISODE 10 EPISODE 11 EPISODE 12 EPISODE 13 EPISODE 14 EPISODE 15 EPISODE 16 EPISODE 17 EPISODE 18 EPISODE 19 EPISODE 20 EPISODE 21 EPISODE 22 EPISODE 23 EPISODE 24 EPISODE 25
TMDb: 8.6/10 91 votes